Backtrack wireless hack — MYSTERY ZILLION
Backtrack wireless hack
August 2009 edited September 2010 in Linux/Unix
Backtrack နဲ့ wireless hack လို့ရတယ်လို့တော့ ကြားဖူးပါတယ်...ကျွန်တော်က linux ကလည်းစိမ်းပါတယ်။ဒါကြောင့် backtrack ကို သွင်းတာကနေစပြီးတော့ wireless hack တဲ့အထိတစ်ချက်လောက် အားရင်ရှင်းပြပေးကြပါခင်ဗျာ
ကျေးဇူး ကမ္ဘာတင်ပါတယ် :6::6::6:
August 2009 edited August 2009 Registered Users, Moderators
Basic Entry intoaWEP Encrypted Network
အဲ့မှာ Backtrack3ကိုသုံးပြီးတော့ Wireless WEP ကိုဟက်ပြတဲ့ Tutorial ရှိပါတယ်...
WAP2 က hack ရခက်တယ် (nearly impossible) လို့ကြားဘူးလို့။ ဟုတ်လားမသိဘူး။
WPA2 က ယနေ့အချိန်မှာတော့ သာမာန် Wireless Hacking တွေအနေနဲ့ ဟက်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ သိပ်မရှိသေးပါဘူး။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း WPA က အားနည်းချက်ကိုပြင်ဆင်ထားတာပဲလေ.. ပြီးတော့ AES (Advanced Encryption Standard)-based algorithm ကိုအခြေခံထားတာပဲ.. လုံး၀မဟက်နိုင်ဘူးလို့တော့ မရှိလောက်ပါဘူး...
backtrack3ရဲ့ kernal က နိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် နောက်ပိုင်း အသစ်ထွက်တဲ့ wireless card တွေနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်တတ်တယ်။ နောက်ပြီး Intel proset card တွေကို iw package ထပ်သွင်းပေးရတယ်။ လက်တွေ့ စမ်းကြည့်ရင် ထင်သလောက် မလွယ်ဘူးဗျ။
မလွယ်ဘူးဆိုရင်တော့ လည်း သူများကိုဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးဗျာ =(
အဲဒီလောက်လဲမခက်ပါဘူး အီမိုရဲ့၊ BT4 ကိ်ုသုံးကြည့်ရတာတော့ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်က လင်းနစ်သိပ်မရလို့ လင်းနစ်ရတဲ့သူဆိုပိုအဆင်ပြေတယ်။ Tutorial တွေလဲအင်တာနက်ထဲမှာ ရှာကြည့်ပေါ့။ အဲဒါကိုကြည့်ပြီးလုပ်။ WEP ကတော့လွယ်တယ်။ WPA က Dictionary word မဟုတ်ရင်တော့ ခုထိတော့မရသေးဘူးဗျ။ မရသေးရင် Tutorial ကိုပြန်ကြည့်။ အဲလိုနဲ့ရသွားလိမ့်မယ်။ လင်းနစ်ရတယ်မဟုတ်လား။ မရလဲကိစ္စမရှိဘူး စမ်းသာစမ်း။
ခုလို အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Youtube မှာ tutorial တွေရှာတော့
မှာတွေ့တာလေးကတော့ မိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော် စာမေးပွဲပြီးရင်တော့ စမ်းကြည့်မယ်လေ
ရရင်တော့ ပြောမှာပေါ့ ////
WEP ပေမယ့် mac filter ပေးထားရင်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ။ တစ်ယောက်ရဲ့ laptop က အရင်ဆုံး ဝင်ပြီး mac address allow လုပ်ထားမှ အဲဒီ mac address ကို fake လုပ်ပြီး hack မှ ဖြစ်တာပါ။ mac filter လုပ်ထားရင်တော့ WEP လည်း သိပ်မလွယ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ဆိုင်မှာ mac နဲ့ပဲပိတ်ထားတယ်။ WEP တို့ WAP တို့ကိုစိတ်မချ လို့။ WEP ဆို ဆိုင်မှာလာသုံး ပြီး key viewer နဲ့ ကြည့်သွားရင် ရနေပြီလေ။ mac နဲ့ပိတ်ထားတော့ fake လုပ်ပြီး၀င်ရင်တောင် mac ထပ်နေရင် error တက်လာမယ်။ နောက်ပြီး subnet ပါခွဲထားမလားလို့။ ခုထိတော့ hack မခံရသေးတော့ subnet မခွဲပဲထားတာ။ ကျွန်တော့ဆိုင်က တစ်ဆိုင်လုံး Wifi (Laptop မဟုတ်ပါ) သုံးထားတာပါ။
If you get enough IV, You can decryptaWEP key. Even if mac filter is set up. You can use macchanger to fake mac.
Don't afraid logging on router. When administrator see the log , you have already scanned and played with network. (or) use ettercap to setup man in middle attack between admin computer and router so that you can sniff router log in password when clever admin log in his router to check log file.
When you get WEP key again in future, you own router. :P
The best way so far is Using WAP with complex passphrase.
To hack WAP,Rainbow Tables is needed.
Where can you get Rainbow Tables??
netlynker wrote: »
မြန်မာပြည်မှာသုံးတဲ့ Passphase လိုမျိုးက Rainbow Table ထဲမှာပါနိုင်ပါ့မလား။ နဲနဲလောက်ရှင်းပြပေးပါဦး
WPA (Wi-Fi Protected Access) ဆိုတာ အရင်လက်ဟောင်း WEP (Wired Equivalent Privacy) ရဲ့ အားနည်းချက်တွေအစား ၀င်ရောက်လာတဲ့ security protocol တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်...
WPA2 ကတော့ WPA ရဲ့ Advanced ပေါ့
WEP cracking စမ်းဖူးတဲ့သူ တော်တော်များများရှိနေပြီ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် MAC filtering နဲ့ ပတ်သတ်လို့ နည်းနည်းလွဲနေတယ်ဗျ။
MAC filter လုပ်ထားရင် ကျနော်တို့ Fake auth လုပ်လို့မရပါဘူး။ Fake auth မရရင် injection မရပါဘူး။ Injection မရရင် IV capture လုပ်တာ နှေးပါတယ်။ အဲတော့ ပုံမှန် အတိုင်း5mins - 10 mins အတွင်းမှာတင် crack လို့မရပါဘူး။ IV လုံလောက်အောင် စောင့်ရတော့ အချိန် ပိုကြာတယ်ဗျာ။ Laptop 1 လုံး2လုံးလောက် ကသုံးတာဆိုရင်4hrs လောက်တောင်ကြာရင်ကြာနိုင်တယ်။ Active network ဆိုရင်တော့ သိပ်ကြာမယ် မထင်ပါဘူး။ blueviruz ရဲ့ ဆိုင်မျိုးပေါ့။
မယုံရင် blueviruz ဆိုင်မှာ သွားလုပ်ကြည့်ကြပါ ( နောက်တာနော် တကယ်လုပ်လို့ ဟိုက ရိုက်လွှတ်ရင် ကျနော်တာဝန်မယူပါ)
BackTrack သုံးပြီး WEP key cracking and MAC filtering လုပ်ထားတာတောင်ဘယ်လို crack လဲဆိုတာအသေးစိတ် ဆွေးနွေးထားတာတွေရှိပါတယ် လာပြီးလေ့လာပါ